Malware hamafa anao FSX ary FSXA
Malware hamafa anao FSX ary FSXA 3 taona 2 volana lasa izay #606
Rehefa mamela anao aho dia misy mpivarotra fiaramanidina anankiroa nivoaka tao amin'ny tranokala samihafa. Ny fandaharan'asa dia hiasa araka izay heveriny fa raha tsy manapa-kevitra ny hamafa. Raha mandeha miaraka amin'ny menio fantsona fanamafisam-peo ianao hamafana varavarankely iray dia hipoitra ary ny karazana maitso dia ho tonga haingana ary ho hitanao fa tsy hisy ny info rehetra ao amin'ny files youre. Tsikaritro fa ity no fotoana voalohany nandehanako nesorina 2 taona lasa izay ary nijery io efijery io ary rehefa hitako ny fiaramanidina rehetra navoakan'i 3500 ary nopotehiko tsy nino izany. Niresaka tamin'ny tranonkala aho ary nampahafantaran'izy ireo izany ary voarara tao amin'ny tranokala aho. Fantatro fa tsy ny mpamorona na ny mpandrindra ny programa satria nampiasa ny vokatra azy nandritra ny taona 10 ny Iive. Ive dia nanandrana ireo mpitatitra 2 ihany nandritra ny telo taona ary nanamarina ny rakitra miaraka amin'ny departemanta fandaharanasa fiarovana ary misy ny malware antsoina hoe sniperspy ary tsy fantatra ao anatin'ity angon-drakitra ity. Sniperspy dia fomba iray izay nametrahanao ny spyware na aiza na aiza ary ny fotoana nanohina azy dia mifandray amin'ny mpandefa izy ary mampiseho ny hetsika mivantana sy iainanao ary ny fampahalalana rehetra anao ao anatin'izany ny angona miafina miafina. Ny fampahafantarako anao dia noho ny fandoavana ny fotoana rehetra hananganana ny fotoana rehetra, ary ity dia natomboka (ny ahy ao amin'ny 2007.) Nandritra ny fandaharam-potoana nataonay ny fandaharana ny fandaharam-potoana sy ny marary dia manandrana manao izay hampahafantarana ny fiarahamonina Raha ny fahitako azy dia tsy misy ny fiheverana fa misy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Iray amin'ireo olona an-tapitrisany sy veteran izay nopotehina tamin'ny yahoo ary nilaza tamiko fa iriko hanonganana ity krizy rehetra manerana izao tontolo izao Rikoooo, misaotra anao nanome anay rehetra tsara Mandehana ary misy fiaraha-monina izay manome & & ## @? !!!!
Malware hamafa anao FSX ary FSXA 3 taona 2 volana lasa izay #607
Raha ny marina, sniperspy dia rindrambaiko fanaraha-maso lavitra izay tsy miankina amin'ny zavatra hafa.
Nahazo na inona na inona hamerenana ireo filazana ireo ianao?
Malware hamafa anao FSX ary FSXA 3 taona 2 volana lasa izay #610
Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia miditra ao amin'ny tranokala ary mamaky ny angona azo ampiasaina miaraka amin'ny programa, dia an-tserasera amin'ny taona 15, ny programa ampiasain'ny fikambanana maro, eny fa na dia ny lalàna aza. Izany no antony nahatonga ahy nandefa ilay fampitandremana, saingy raha misy fisalasalana dia alefaso ny mpametam-peo malaza indrindra, araka ny nolazaiko teo aloha, fa tsy ny kopia rehetra, ary tsy mahafantatra afa-tsy ny fandaharan'asa izay nanondroako ny mpitsikilo. Nieritreritra aho fa tsara kokoa ny manandratra ny olona amin'ny traikefa fa tsy mahita ny tenany. Ny marina dia azoko antoka fa izany no mahatonga ahy tsy hiblaogy na hanamarika na inona na inona. Rehefa napetraka amin'ny toerana azo itokisana aho, dia mila manonona vokatra izay manao ny fahasimbana aho, saingy amin'ity tranga ity dia fantatro fa tsy nataon'ilay mpamorona ny programa na programa voalohany. Ny tena manokana dia te-hampandre ny tranonkala aho mba tsy hanesorana ny olona. Izaho dia tsy handefa hafatra na inona na inona eo amin'ny toerana misy anao, raha ny marina dia efa teo amin'ny toerana misy anao hatramin'ny nanombohany, na dia voatanisa ho mpikambana vaovao aza. Niditra tao amin'ny 2008 na 2009 aho. Ie dia niara-niasa tamin'i Microsoft avy amin'ny seattle sy ny teknolojia momba ireo olana sy fampandrenesana tsy ho an'ny MSFS afa-tsy izay mandeha amin'ny alalan'ny programa microsoft ary na tambajotra izay dia toa ny asa izay mandeha amin'ny Xntumx pct amin'ireo ordinatera manerantany, ary izany satria noho izany Olana lehibe noho ny ankamaroan'ny ordinatera mampiasa ny programa MS. Hoy i Nuff.
Malware hamafa anao FSX ary FSXA 3 taona 2 volana lasa izay #612
Raha tianao ny hitazona ny fahalalan'ny olona sasany, nahoana no tsy lazaina amintsika hoe inona / aiza izy ireo fa tsy midika hoe vagy?
Fotoana mamorona pejy: 0.415 segondra